Posted by: chhepyastra weekly | अप्रील 30, 2011
सहमति र सहकार्यको आधारमा अहिलेको संक्रमणकाललाई हल गर्नु जरुरी छ
गिरिराजमणि पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य- एनेकपा -माओवादी
० पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ, यसले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयका ’boutमा बताइदिनुस् न ?
भर्खरै सम्पन्न पार्टीको बैठक वर्तमान अवस्थामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने दूरगामी महत्वको बैठक थियो, हामीले अघिल्लो वर्ष निकै ठूलो आन्दोलन गर्यौ, त्यो आन्दोलनलाई पूर्णता दिनको लागि हामी आफैाभित्र कतिपय समस्याहरू रहे । केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी नेतृत्वभित्र बुझाइमा एकरूपता छैन, संघर्षको तयारी अझै पुगेको छैन, यहा भएको परिवर्तनलाई अवलोकन गरिरहेका बाहृय शक्तिहरूलाई सत्यतथ्य बुझाउने सवालमा पनि हामी पछि नै छौ भनेर अघिल्लो वर्ष नै आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । नेतृत्वको एकरूप बुझाइको लागि हामी पालुङटार गयौ, त्यहा पार्टीभित्रका बहसहरू उठे । एउटा कार्यदिशा तयार गरेर हामी पालुङटारबाट फर्किएका थियौ । पालुङटारमा सम्पन्न छैठौा विस्तारित बैठकबाट पारित कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई ध्यान दिादा हाम्रो पार्टी प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधि तीव्र भएर गएका, प्रतिविद्रोहका आधारहरू तयार पार्न थालिएका, संविधानसभालाई भङ्ग गर्ने षड्यन्त्र भएका छन् । नेपाली जनताको संविधान निर्माण गर्ने भावना छ, त्यो जिम्मेवारीलाई यही बसेर पूरा गर्नुपर्नेमा भारत गएर त्यहा शासकहरूसाग सोध्ने, संविधानसभा भङ्ग गरेर चुनावमा जानेजस्ता गतिविधि बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेरेर कार्ययोजना परिमार्जन गर्ने नया प्रस्ताव लिएर आउनुभएको हो । अध्यक्षको प्रस्तावको विरुद्धमा उपाध्यक्ष वैद्यले नया राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । लामो छलफलपछि सर्वसम्मत नभए पनि अध्यक्षले अगाडि सार्नुभएको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समितिले पास गरेको छ, त्यो नै अहिले पार्टीको आधिकारिक लाइन बनेको छ । वैद्यले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार भिन्न विचारको रूपमा छलफलको लागि तल्लो तहसम्म जान्छ । हाम्रो पार्टी पालुङटार बैठकपछि अन्तरसंघर्षको विधि तयार गर्दै सहमति र विमतिको बीचमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अहिलेको बैठकले ठोस धारणा बनाएको छ । त्यसैले अहिलेको यो बैठक नेपालको वर्गसंघर्षलाई अगाडि बढाउने कोणबाट र अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थित गर्ने कोणबाट एउटा महत्वको बैठक भएको छ ।
० तपाईंहरूले पार्टीको कार्यदिशा छिटो-छिटो परिवर्तन गर्दा कार्यक्रममा अन्योलता देखिन्छ नि
हामीले कार्यदिशा परिवर्तन गरेका छैनौा । हामी पालुङटार बैठकले तयार गरेका कार्यदिशामै अगाडि बढिरहेका छौ । कार्यनीति त चौबीस घण्टामा पनि बद्लिन सक्छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर कार्यनीति बन्ने गर्छ । कार्यदिशालाई लागू गर्नको लागि शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका जिम्मेवारीहरूलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा परिवर्तन भएको छैन । हाम्रो नेतृत्वको विशेषता रणनीतिक विशेषता र कार्यनीतिक लचकता हो । कार्यनीतिहरू आवश्यकताअनुसार रणनीतिको सेवा गर्ने गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पार्टीका साथीहरू कार्यनीति र रणनीतिको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धबाट एकदम प्रस्ट हुनुहुन्छ । अहिले पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्न सक्ने शक्ति माओवादी नै भन्ने कुरा आमजनताका माझ फेरि एक पटक स्थापित भएको छ । यसले पार्टीको पक्षमा, देशको पक्षमा, वर्गसंघर्षको पक्ष सकारात्मक योगदान दिएको छ ।
० तपाईंहरू अहिले सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ तर सरकार गठन भएको तीन महिना पुगिसक्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले पुर्णता पाउन नसक्नु पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । हामी मात्र जिम्मेवार छौ भन्ने होइन । गत माघ २० गते झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि हामी त २३ गते नै सरकारलाई पुर्णता दिने पक्षमा थियौा । तर, उहााहरूले एकतर्फीरूपमा गृहमन्त्रीलगायतका अन्य मन्त्री घोषणा गरिसकेपछि हाम्रो समर्थनमा निर्माण भएको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने खेलहरू त्यहीबाट सुरुवात भए । सात बुादे सहमतिको व्याख्यामा नै हाम्रो एक महिनाभन्दा बढी समय बित्यो । प्रधानमन्त्रीबाट गृहमन्त्रालयलगायतका पूर्वसहमति भएका मन्त्रालय हामीलाई नदिने अभिव्यक्तिहरू आए । त्यो अवस्थामा हामीले केही समय कुर्नुपर्यो । हाम्रो पार्टी प्रस्ट छ कि यो सरकार, नेपालमा आˆनो अर्धऔपनिवेशिकता कायम गर्न खोज्ने भारतीय शासकहरूको आकांक्षाविपरीत, संविधानसभाबाट शान्ति र संविधानका ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्न सहयोग गर्न गठन भएको देशभक्तहरूको सरकार भएकाले यो सरकारलाई पूर्णता दिन र सरकारका कामकारवाहीलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री पठाउने व्यक्तिको नाम छान्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीले हेडक्वाटरलाई दिएको छ । हेडक्वाटरले चाडै निर्णय गर्छ । हाम्रोजस्तो जटिल राजनीतिक घटनाक्रममा सबै रेखाहरू सरल ढङ्गले अगाडि बढदैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
० संविधान जारी हुने भनिएको दिन जेठ १४ आउन अब एक महिना पनि बााकी छैन, संविधान जारी हुने अवस्था पनि देखिादैन, सेना समायोजनको मुद्दा पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हुन्छ त ?
विगतमा राजीनामा दिएको सरकार सात महिनासम्म टिकाउने खेलहरू यहाा भए । त्यसले गर्दा धेरै समय खेर गयो । त्यसपछि हाम्रो पहलकद्मीमा वर्तमान सरकार गठन भयो । यो सरकारले आˆनो कामहरू अगाडि बढाउन थाले पनि षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिएका छन् । अहिले संवैधानिक समितिको बैठकसम्म बस्न नदिने षड्यन्त्र यहा भइरहेको छ, हाम्रो कोसिस जेठ १४ भित्र हाम्रा सहमति, विमति विषयवस्तुहरूलाई सामेल गरेर एउटा मस्यौदा संविधान निर्माण गरेर जनताको बीचमा लैजाऔा भन्नेमा हुन्छ । जसले गर्दा हामी संविधान निर्माणको सक्रियतामा छौा भन्ने कुरा जनताले व्यवहारबाट अनुभूति गर्ने स्थिति पैदा हुन्छ । सेना समायोजन, संविधान निर्माणको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । सेना समायोजन र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई एकअर्कासाग जोडेर हेर्नुपर्छ । नेपालको लागि नयाा सुरक्षा नीति निर्माण गरिनुपर्छ । सात बुादे सहमतिमा हामीले सेना समायोजनको मोडालिटी’boutमा उल्लेख गरेका छौ । जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक नेतृत्वसहितको समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सेनाले समायोजनसम्बन्धी अनौपचारिक रूपमा पठाएको प्रस्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ । सेना समायोजनको मोडलमा सहमति गरिसकेपछि तुरुन्तै रिगुपिङ्गमा पनि जान सकिने नीति हामीले बनाएका छौा । अहिलेको समस्यालाई हल गर्न यहाका प्रमुख दलहरू तयार भए पनि हामीभन्दा लचकताका साथ कोही आएको छैन । द्वन्द्व चर्काइराख्ने, समस्या हल हुन नदिने, देशमा गृहयुद्ध नै चलाइरहने चाहनाहरूले विभिन्न खालका बाधा, अड्चनहरू सिर्जना गर्न सक्छन् । संविधानको समितिको बैठक राख्न काग्रेस, एमालेका साथीहरू मानिरहेका छैनन् । दलहरू एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउन ताछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
० तपाईंहरू शान्ति र संविधानको लागि लचकता प्रस्तुत गर्दै आएको भन्नुहुन्छ, कतै तपाईंहरूको लचकता यथास्थितिवादतर्फ लम्केको त होइन ?
हाम्रो पार्टी यथास्थितिवादतर्फ लम्कने कुनै सम्भावना छैन । अहिले हामीसाग गणतन्त्र छ, संघीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समावेशीकरण छ, यसले के पुष्टि गर्छ भने देश यथास्थितिमा छैन । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हामीसामु छ । हामीले यहााको गणतन्त्रलाई अलि जनमुखी गणतन्त्र बनाउ भनेर लागिरहेका छौ । यो गणतन्त्रले जनताका गाास, बास र कपासलाई सम्बोधन गरोस् । अहिले हामी संविधान निर्माणको क्रममा राज्यपुनर्संरचनाको बहसमा छौा । मुलुकको शासकीय रूप कस्तो बनाउने भन्ने सन्देशमा नेपालको लागि दुईवटा शक्तिकेन्द्र बन्नु हुादैन । यहा जनताबाट चुनिएको राष्ट्रति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौ । मौलिक हकको सावलमा पनि धेरै कुरामा सहमति भएको छ । हामी क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा पनि लडिरहेका छौा । अहिलेको लडाइा भनेकै अग्रगमनतर्फ जाने कि पश्चगमनतर्फ जाने भन्ने हो । हाम्रो पार्टीले जनताका एजेन्डालाई आˆनो कोणबाट लागू गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेको हुनाले सकेसम्म अधिकतम रूपमा जनताका प्रश्नहरूलाई शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणसाग जोडेर नै अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छ । यसबाट पछि हटेर यथास्थितिमा जाला भन्ने चिन्ता नलिए हुन्छ ।
० पार्टी सरकारमा सामेल भएको छ, सहिद, घाइते, बेपत्ताका परिवारले कुनै राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् , यस विषयमा पार्टीले के सोचिरहेको छ ?
यो संक्रमणकालीन अवस्थाको सरकार हो । अहिले हामीले पूरै जितेर हाम्रो पार्टीको एकल सरकार बनेको अवस्था होइन । सहिद, बेपत्ता, घाइते परिवारहरूलाई पार्टी सरकारमा सामेल भएकाले पूरै विजयको कोणबाट त्यस्तो भावहरू आउनु अस्वाभाविक होईन । हामीमाथि लागेका मुद्दाहरू अझै खारेज भएका छैनन् । अहिले पनि नया-नया मुद्दाहरू उठाउने काम भइरहेको छ । परिवर्तनको कोणबाट हेर्दा अहिले कोही पनि सन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन । राजनीतिक समस्याहरूलाई हल गर्न पायौा भने यी कुराहरूलाई हामी क्रमशः सम्बोधन गर्दै जान सक्छौ । यो सरकारका सीमा छन् । सबै कुराहरू अहिल्यै पूरा गरिहाल्ने अवस्था अहिले छैन । पार्टी सरकारमा सहभागी भएकाले कति काम जनताको पक्षमा गर्न सकिन्छ, त्यो हामी गर्छौं ।
० तपाईं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ, मुलुकको महत्वपूर्ण अस्पताल भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरू अस्पताल नै बन्द गरेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू धाइरहेका छन् । यसको समाधान कसरी गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा यस्तो समस्या नआओस् भनेर माधव नेपालको सरकार हुादा नै काग्रेसका स्वास्थ्यक्षेत्र हेर्ने प्रमुख व्यक्तिहरूसाग मैले कुरा गरेको थिएा । हाम्रो मान्यताचाहिा नेपालका प्रमुख अस्पतालहरू सहमतिको आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले हिजो वीर अस्पतालको समस्या आउादा सहमतिको आधारमा चलाउन खोजेका थियौ । जुन ढङ्गले क्यान्सर अस्पतालमा पछिल्लो स्वास्थ्यमन्त्रीले कामहरू गर्नुभयो, त्यो विधसम्मत छैन । त्यत्रो ठूलो अपहरणमा परेका एकजना नाम चलेका वरिष्ठ चिकित्सकले एक कार्यकाल म अझै अस्पतालमा काम गर्छु भनिसकेपछि हामीले स्वतः उहाालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी नदिनको लागि विभिन्न कुराहरू भए । अहिले त्यहा बढी राजनीतिकरण गरिएको छ । यो ढङ्गले समस्या हल हुादैन । स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । आˆना गलत निर्णयहरूलाई सल्टाउने, आफूलाई चित्त नबुझेका निर्णयहरू परिवर्तन गर्न दबाब दिने अन्य तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेर बन्द गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
अहिले हामी अप्ठ्यारो मोडमा छौ । जेठ १४ नजिकिादै आइरहेको छ । सहमति र सहकार्यका आधारमा अहिलेको संक्रमणकाललाई हल गर्नु जरुरी छ । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य घटक भएको हुनाले माओवादीले पछिल्लो समय आˆनो ठोस नीतिहरू सार्वजनिक गरेको छ । अन्य दलहरूले कस्तो खालको रबैया लिन्छन्, सभासद्हरूले कसरी त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसैमा मुलुकको भविष्य निर्भर रहन्छ र यस पत्रिकाले पनि सत्यतथ्य प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्न चाहन्छु ।